[Fikirka Dadweynaha]: Mashruuca Xunbo Weyne Waxa Ka Masuul ahaa Wasaarada Biyaha Agaasimaha Guudna waa in degdeg xilka looga xayuubiyaa maxkamadna la soo taaga
Friday February 16, 2018 - 23:02:53 in Arrimaha Bulshada
Wakaalada biyaha muu hoos iman jirin mashruuca biyaha xunbo weyne laakiin wax aka masuul ahaa wasaaarada biyaha taas oo guud ahaan ka masuul ah biyaha qaranka oo dhan. Wasaarada biyaha oo ah meel uu ragaadiyey musuqmaasaq baahsan oo lafaha gaadhay oo
Wakaalada biyaha muu hoos iman jirin mashruuca biyaha xunbo weyne laakiin wax aka masuul ahaa wasaaarada biyaha taas oo guud ahaan ka masuul ah biyaha qaranka oo dhan. Wasaarada biyaha oo ah meel uu ragaadiyey musuqmaasaq baahsan oo lafaha gaadhay oo qaran ku ah dhabar jab kaas oo had iyo goor lagu aaneeyo agaasimaha guud oo ku noqday masiibo asy ka shaqayn kari waayeen wasiiradii kala danbeeyey wasaarada biyaha.
Sida uu sheegay wasiirka cusub ee biyuhu waxa laga qoday 13 ceel masaafo dhan 1 kiilomitir taas waa khalad weyn oo farsamo oo uu galay agaasimaha guud ee wasaarada biyuhu waana in xilka degdeg looga qaado lana soo xidho. Wasiirada had iyo jeer waxay ka shaqeeyan siyaasada iyo maamulka guud laakiin n DG-ga ayaa ah kan kala wada arimaha farsamada iyo ceelasha. Waxa kale oo fahsilmay dhaamkii waynaa ee laga qodayey xunbo weyne kaas oo isna u fahilmay arin farsamo oo uu galay agaasimaha guud ee wasaarada biyuhu.
Hadaanu nahay dadka xaafada Axmed Dhagax iyo Maxamuud Haybe waxaanu u aragnaa fashilinkta dhaamka xunbo weyne inay tahay ula kac iyo gabood fal uu noo gaystay agaasimaha guud ee wasaarada biyuhu waana danbi wayn oo uu naga galay waxa uu fashilyey mustaqbalkii nolosha yada, waxaan ka codnanaynaa xukuumada cusub in aanay xilka oo qudha ka qaadin ee maxkamada la soo taago oo lagu qaado denbiga uu naga galay. Sida oo oo kale denbiga waxa kula jara agaasimayaasha wasaarada biyaha kuwaas oo ah qaar uu daashaday musuqmaasuqu waa in iyaga maxkamada lasoo taaga oo denbiga ay u mad aka galeen lagula xisaabtamaa wasiirka cusubna waxa laga rabaa inuu umada si daacad ah ugu adeego.
W/Q : C/qani Goodir.